'Rakkoo mana hidhaafi Labsii Yeroo Muddamaa kaasnee dubbanneera' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Komishinara Ol Aanaa Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Dursaa Mirga Namoomaa kan ta'an Komishinarri Ol Aanaa Zayiid Ra'aad Al-Huseen tibba kana Itoophiyaa daawwwachuutti jiru. Yeroo turtii isaanii kana keessa abbootii gadaa, warra hidhaarra turanii ba'an dabalatee gaggeessitoota paartileen siyaasaa, gazexeessitootaafi warra mirga namoomaaf dhaabbatan waliin haasa'aniiru.
Gama mootummaatiinis aanga'oota ol aanoo waliin wal arganii hala qabannaa mirga namaa biyyattiin itti jirturrattis marii gaggeessaniiru.
Al-Huseen Bishooftuutti Hora Arsadeellee daawwataniiru. Yunvarsiitii Finfinneettis argamuun hawwaasa Yunvarsiitichaa waliin haasaa taasisaniiru.
Goodayyaa suuraa Dr.Mararaa Guddinaa
Itti Gaafatamaan Kongireesii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dhimmoota kaasanii Komishinaricha waliin irratti mariyatan BBC'tti himniiru.
"Ana dabalatee warra hidhaatii bane nu dubbiseera. Attamitti turtanii? Mana hidhaa keessa maaltu ture? Biyyi kun garamitti deemti? kan jedhu nu gaafatanii siyaasa biyya kanaa hanga danda'ame waliin haasofneerra," jedhan.
Rakkoo cimaa biyyattii mana hidhaa jiruufi Labsii Yeroo Muddamaa…
Akka Dr. Mararaan jedhanitti Komishinarichi sochii biyya kanaafi garamitti akka isheen deemaa jirtu nama hordofaa jiranidha. "Nutis gama keenyaan waan jiru kaasnee rakkoo jiru waliin haasofneerra."
Yeroo marii Komishinaricha waliin taasisanitti Dr. Mararaan rakkoo guddaa mana hidhaa biyyattii keessa jiru, dubbii Labsii Yeroo Muddamaa kan rakkoo guddaa ta'ee jiru kaasanii waliin haasa'uu dubbatu.
Gara fuula duraatti nagaafi tasgabbii uumuuf filannoo dhugaa…
Akkasumas, gara fuula duraatti nagaafi tasgabbiin barbaadamu dhufuudhaaf filannoon sirriin jiraachuu akka qabu kaasanii waliin dubbachuu isaanii BBC'tti himaniiru.
Jijjiiramni dubbatame akka hojiirra ooluuf dubbachaa jirra…
"Amma akka argaa jirrutti waanta baayyeetu lafa jira, wanta baayyees argaa jirra. Mootummaan jijjiirama fiduuf dubbachaa tureera. Nutis jijjiirama dubbachaa ture akka hojiirra oolchuuf dubbachaa turreerra," jedhan Dr. Mararaan.
Al-Huseen waa'ee biyya kana keessatti ta'aa jiru akka sirriitti hubataniifi hordofaa jiranis isaanitti himuu Dr. Mararaan dubbataniiru.
'Of eegannoo guddaadhaan abdii godhachuudha…'
Komishinarichi kanaan dura bara 2017 keessa biyya kana daawwachuuf dhufanii dhorkamanii turan. Amma garuu akka daawwatani eyyamameeraaf. Kun abdii isin keessatti horeeraa gaaffii jedhuuf, 'Of eeggannoo guddaadhaan abdii gochuudha' jedhan Dr. Mararaan.
Komishinara Ol Aanaa Al-Huseen waliin namoota haasawaarratti argaman biroon Dubbi Himaa Koree Fala Barbaadduu Hawwaasa Musiliimaa Ahimaddin Jabal turan.
'Ol aantummaan seeraa hojiirra oolaa hin jiru…'
"Akka rakkootti kan mullatuu dhimma mirga namaatiin walqabatee biyya kana keessatti ol aantummaan seeraa hojiirra oolaa hin jiru. Kanaaf, hundi keenyayyuu hanga beeknu kallattii jiruun furmaata keenyee jirra," jedhan Ahimaddin.
Akka Dubbi Himaan kun jedhanitti, yeroo turtii gababaa maree kanaan rakkoo biyya keessa jiru kaasuun dadhabamullee, waantota murteessoo ta'an kaasaniiruuf. Akka Ahimaddin jedhanitti, Mootummoota Gamtoomaniitti Dhimmi Mirga Namoomaa kun damesaa Finfinneetti banatee haala qabanaa Itoophiyaa keessa jirurratti hojjechuuf waliigalteerra ga'ameera. Baatii muraasaan booda biiroon banamee biyya kana keessatti qorannoon akka gaggeeffamu hubachuu isaanii dubbatan.